Sonos Inosuma Yayo Inonyanya Kudhura "Ray" Soundbar | Nhau dze iPhone
Sonos inopa yayo nyowani, inodhura "Ray" soundbar asi iine mhando yakafanana senguva dzose
louis padilla | 12/05/2022 18:53 | IPhone zvishongedzo, Noticias
Sonos yakaratidza zvitsva zvayo uye inotiunzira mutauri mutsva weimba yedu yekutandarira iyo inotiita Nakidzwa nemabhaisikopo uye akateedzana ane ruzha rwakanyanya asi nemutengo unodhura. Akatizivisawo kumubatsiri wake wezwi uye mavara matsva eSonos Roam.
1 Sonos Ray, ruzha rutsva rwemunhu wese
2 Mavara matsva eSonos Roam uye mutsva wezwi mubatsiri
Sonos Ray, ruzha rutsva rwemunhu wese
Sonos akawedzera mutauri mutsva kukhathalogi yayo yemanzwi makuru. Iyo Sonos Beam neSonos Arc ikozvino yabatanidzwa neiyo Sonos Ray itsva, yakawedzera compact ruzha bar inovimbisa yepamusoro ruzha rwemhando yekunakidzwa zvizere nemultimedia yedu yemukati muimba yekutandarira kana yekurara, pamusoro pekugona kuishandisa semukurukuri kuteerera mimhanzi nekuda kwekubatanidzwa neApple Music uye Spotify, uye kuenderana neAirPlay 2.
Ruzha rwayo rwakakwana harufanire kutinyengedza zvinoenderana neSonos, sezvo ichizoshandisa zvakaitenderedza kugadzira ruzha mukamuri rese, kuwedzera kune Base Reflex system yekudzora bass. Inochengetedzawo maficha atinokoshesa zvakanyanya kubva kune anodhura modhi, senge kuwedzera inzwi kuitira kuti unzwe nhaurirano zvakajeka kunyange mumafirimu akawanda ekuita, uye night function mode izvo zvinoderedza kusimba kwokunzwika kukuru zvikurusa usiku kudzivisa kuvhiringidza mimwe mitezo yeimba kana kuti vavakidzani.
Chokwadi zvaita Wi-Fi uye Ethernet yekubatanidza, kukwanisa kuridza mimhanzi kubva kune makuru ekutepfenyura masevhisi zvakananga, kana kutumira izvo zvatinoridza pa iPhone yedu kana iPad kuburikidza neAirPlay. Iwo eruzha bhaa anodzora ane tactile uye ari pamusoro, uye isu tinogona zvakare kudzora kuburikidza neSonos application kubva ku iPhone kana iPad yedu.
Chii chatinorasikirwa nacho kana tichienzanisa nemhando yepamusoro? Uyu Sonos Ray ine optical connection chete, saka tinorasikirwa nekuenderana nemhando yepamusoro masaini masaini akadai seDolby TrueHD, DTS HD Master Audio kana Dolby Atmos. Mukudzoka tichave nekufambirana nemhando dzeterevhizheni dzekare dzisina eARC zvinobuda, zvinodikanwa kune iwo manzwi emhando yepamusoro. Isu tinorasikirwawo nemakrofoni, saka iyi bhaa yezwi haigone kudzorwa zvakananga nezwi, kunyangwe isu tichigona kuzviita kuburikidza ne smartphone yedu. Kunyangwe kusave neHDMI yekubatanidza, isu tinogona kushandisa yedu yakajairwa kure kure kudzora vhoriyamu yekutenda kune infrared inogamuchira kumberi kwayo.
Iyo itsva Sonos Ray ichave iripo kubva munaJune 7 uye ichava nemutengo we €299, pazasi pe499 € yeSonos Beam kana iyo € 999 yeanoshamisa Sonos Arc, chishongo chiri mukorona.
Mavara matsva eSonos Roam uye mutsva wezwi mubatsiri
Kutanga muna Chikumi tichava nemubatsiri mutsva wezwi kumba. Kuburikidza nemazwi "Hey Sonos" tinogona kudzora vatauri vedu veSonos, chero vaine S2 chip, uye nemukana wekuti kugadziridzwa kwemirairo yedu kuitwe mumukurukuri, hapazovi nekubatana kumaseva uye hapana zvikwiriso zvinonzwika zvichatumirwa kuti zviongororwe. Uyu mubatsiri achaenderana neApple Music neAmazon Music, asi isu hapana chatinoziva nezveSpotify parizvino. Parizvino ichange ichingowanikwa muChirungu, vhezheni yechiFrench yakatosimbiswa gore risati rapera asi isu hapana chatinoziva nezveSpanish.
Pakupedzisira, iwo mavara matsva eSonos Roam mataurirwo anotakurika akaunzwa. NeWi-Fi neBluetooth yekubatanidza, mubatsiri wezwi uye kuenderana neakanyanya kutenderera mimhanzi masevhisi, anosanganisira Apple Music neSpotify, anogona zvakare kutengwa (kubva zvino zvichienda mberi) matatu mavara matsva: Olive, Sunset uye Wave.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Sonos inopa yayo nyowani, inodhura "Ray" soundbar asi iine mhando yakafanana senguva dzose